I-Betsson: isibuyekezo se-casino online
I-NetEnt, Microgaming, Leander, NeoGames, Nolimit City, NYX, Games Inc, Evolution, Thunderkick, Red Tiger Gaming, Quickpin, Play'n Go, iSoftBet
EcoPayz, Muchbetter, Transfer Bank, Trustly, Visa, MasterCard, Maestro
EcoPayz, Muchbetter, Transfer Bank, Trustly, Visa, MasterCard
IBetsson ingelinye lamakhasino aziwa kakhulu kwi-intanethi. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo owaziwa nangokubheja. Izuze izinhliziyo zabadlali emhlabeni wonke iminyaka eminingi, ihlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphezulu kakhulu zokugembula nokubheja. Umkhiqizo owaziwayo wokugembula owasungulwa ku-2001. Inkampani eyasungulwa futhi yethulwa eMalta yathola ilayisense lokuqhuba imisebenzi yokubhuka e2002 kanti kusukela lapho ibilokhu inqoba imakethe yokugembula ngokunikeza izixazululo ezintsha namabhonasi kubadlali abavela emhlabeni jikelele.
I-Betsson ingelinye lamakhasino amadala aku-inthanethi asasebenza emhlabeni manje.
Sizobheka ama-nuances obuchwepheshe ekhasino, elinenhloko yalo eku-inthanethi esizeni www.usenmov.co
IsiNgisi, futhi nesiPolish kusuka ohlwini lwezilimi lwe-19. Ukukhethwa kwezilimi kulandela ngemuva kokungena ekhasini eliyinhloko. Isidlali singakhetha ulimi, emva kwalokho isiteji sinikeze isisulu esihunyushwe ngokuphelele kuso. Ukuhlanganisa okukhulu ngokutholakala kwenguqulo yolimi lwesiPolish.
Izindlela zokukhokha zamukelwe
I-EcoPayz, ukudluliselwa kweBhange, iThembekile, iVisa, i-MasterCard, iMaestro nokudluliselwa kwamabhange endabuko. Uhlu olubanzi lweziteshi zokukhokha lukuvumela ukuthi ubeke futhi ukhiphe imali etholwe kunoma iyiphi i-akhawunti yasebhange emhlabeni.
Uhlobo lwemali olwamukelwe yikhasino
I-PLN, i-EUR, i-USD, i-GBP. UBetsson ulungiselele ukwanda kwabadlali basePoland, enikeza ukwesekwa kwe-PLN.
Abadlali basePoland akudingeki bakhathazeke ngokuxhaswa kwamanye amazwe - eBetsson, kokubili usizo ne-hotline ngokugcwele ePoland. Inombolo yosizo yamahhala isebenza izinsuku eziyisikhombisa ngesonto, amahora angama-7 ngosuku. Okunye okufanele ukushiwo yisigaba sosizo esikhulu ne-FAQ, lapho abadlali be-novice bangathola khona izimpendulo zemibuzo ehluphayo.
Ilungiselelwe abadlali ababhalisa ibhonasi ye-akhawunti equkethe ukuphinda idiphozi yokuqala. Uyemukela ibhonasi i-100% ku-2000 PLN kanye ne-200 spins yamahhala.
Mane ubhekisise ama-imeyili uBetsson akumema ngawo ukuthi usebenzise ama-spins wamahhala nezikhala emidlalweni yawo. Ngaphezu kwalokho, kunamabhonasi amukelekile alinde abadlali - i-PLN 2000 yokubhaliswa kanye ne-200 spins yamahhala.
Ngenkathi sisemidlalweni, iBetsson yekhasino inikeza ukubheja kwezemidlalo (ukubhuka) kanye nokugembula ngendlela yendabuko neyehluke kancane (kubalandeli bokuthuthuka). Poker, i-roulette, amakhadi e-scratch, Slots, i-Bingo nezinhlobo ezahlukahlukene zale midlalo. Abadlali abathanda ukwakheka okusha ngeke bakhungathekile.
IBetsson iyi-platform yekhasino efakazelwe - esobala futhi enezinzuzo eziningi. Kuyafaneleka ukusebenzisa ithuba lokuhlangenwe nakho, amabhonasi kanye nezinhlobonhlobo zemidlalo yekhasino enikezwayo. Ikakhulukazi manje njengoba uBetsson ethule amabhonasi amukelekile wabadlali abasha nama-spins wamahhala.
»Qala ukudlala iBetsson